शहरमा मर्निङ वाक खतरापूर्ण ! - Everest Dainik - News from Nepal
शहरमा मर्निङ वाक खतरापूर्ण !
काठमाडौं, मंसिर ३ । सहरका सडक छेउछाउ मर्निङ वाक गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने ख्याल गर्नुहोस् ! बाहिरी प्रदुषणका कारण हानिकारक कण मिसिएपछि हावाले यतिबेला नैसर्गिक गुण गुमाएको छ ।
त्यसैले दूषित वायुका कारण फोक्सोलगायत संवेदनशील अंगमा श्वासप्रश्वासजन्य रोग निम्तिन सक्छन् । बढ्दो वायु प्रदुषणका कारण मर्निङ वाक नगर्न वीर अस्पतालका वरिष्ठ नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. ढुण्डिराज पौडेलको सुझाव छ ।
याे पनि पढ्नुस मर्निङ वाक गर्दा ध्यान दिनुपर्ने यी कुराहरु
सास फेर्दा थुलोधुवाँका कण असर पुग्छ, उनले भने, ‘ठूला कण श्वासप्रश्वास नलीमा अडकन्छन् । मसिना कण भने सीधै फोक्सोमा पुग्छन् ।’ २.५ माईक्रोनभन्दा साना कण सीधै फोक्सोमा पुग्छन् । फोक्सोबाट रक्तसञ्चार प्रणालद्धारा मुटु, मिर्गौला, छालालगायत अंगमा असर पुग्छ, डा. पौडेलले भने । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस दैनिक हिंड्नुको १२ फाइदा के के हुन जानी राखौं
ट्याग्स: morning walk
चीनमा फेरि बढ्दै कोरोना
मृत्युपछि पर्साकी १८ वर्षीया युवतीमा कोरोना पुष्टि
भारतमा घट्यो कोरोना
फेरि काठमाडौं प्रवेशमा कडाइ
जिउँदो हुने विश्वासमा पाँच दिनसम्म घरमै शव राखेपछि…
भारतसँगको विवादित क्षेत्र समेटेर पाकिस्तानले जारी गर्‍यो नयाँ नक्सा
बेइरुत विस्फोट: कम्तीमा ७८ को मृत्यु, ४ हजार भन्दा धेरै घाइते (तस्बिरसहित)